Toro lalana Apple ho an'ny mpivarotra, Patent Force Force, Apple's 40 taona amin'ny mozika, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Toro lalana Apple ho an'ny mpivarotra, Patent Force Force, Apple's 40 taona amin'ny mozika, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Pedro Rodas | | Apple, About us, Apple products
Hifarana ny herinandro vaovao ary toy ny mahazatra dia mamoaka ny fanangonana vaovao izahay. Ity no vaovao izay nisy fiatraikany lehibe indrindra nandritra ny herinandro. Rahampitso dia manomboka ny herinandro izay hamela antsika sahady amin'ny tapaky ny volana aprily, roa volana handehanana mandra-pahatongan'ny Apple Keynote manaraka.
Keynote izay havaozina ny MacBook ary angamba ho hitantsika ny maodely vaovao an'ny paoma manaikitra, ny Apple Watch 2.
Andao atomboka ity miaraka amin'ny vaovao miresaka momba ireo torolàlana vaovao nomanin'i Apple ho an'ireo mpamatsy azy. Apple dia nanova sy nampifanaraka ny fenitra narahiny nandritra ny taona vitsivitsy hanatsarana ny kalitaon'ny akora akora vokariny ary mivantana amin'ny mpiasa amin'ireo orinasa ireo. Nandritra ny fotoana kelikely, ny orinasan'ny paoma manaikitra nametraka fenitra vaovao ho an'ireo mpamatsy azy izay manampy amin'ny fanatsarana ny fepetra miasa ho an'ny mpiasan'ireo orinasa ireo ary, ankoatr'izay, manatsara ny fahombiazana sy ny kalitaon'ireo akora ampiasaina izay ampiasain'i Apple amin'ny fitaovany.
Raha tsy manao zavatra maro dia ratsy kalitao ary tsy manintona ary raha mahavita be dia voatsikera koa. Miresaka momba ny fanambarana nataon'ny CEO an'ny Fitbit izahay nilatsaka tao anaty tambajotra momba ny fahafahan'ny Apple Watch manao hetsika hafa. Rehefa nanangana ny Apple Watch ireo tao Cupertino dia maro no mpanamboatra bracelets nanisa izay nanomboka nangovitra noho ny tahotra ny famantaranandro Apple voalohany Haka ny varotra avy amin'ny fehin-tànana miantra aho amin'ny alàlan'ny fanolorana mitovy fa miaraka amina endri-javatra maro hafa. Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana. Raha ny marina, volana vitsivitsy taorian'ny nivarotan'izy ireo dia nisondrotra ny isan'ny varotra fametahana haba, fa indrindra ireo an'ny mpanamboatra Fitbit, orinasa iray izay nanolotra an'ity karazana fitaovana ity nandritra ny sivy taona mahery.
Lafiny iray hafa izay navoakanay tamin'ity herinandro ity ny fomba fahitan'ny mpampiasa Mac azy Sary mivantana amin'ny OS X. Ny iray amin'ireo safidy efa nambaranay tamin'ny kinova beta an'ny OS X 10.11.4 (tamin'ny fiandohan'ny taona) dia ny mety hijerena sy hizarana ny sary mivantana ao amin'ny rindranasan-tsika Messages, ankehitriny dia ho hitantsika amin'ny fangatahan'ny mpampiasa sasany ahoana ny fahitana ireo firaketana kely ireo rehefa mandefa iray amin'izy ireo amin'ny Mac izahay.
Manohy ny fitambaranay amin'ny lahatsoratra nifandraika tamin'ny laptop vaovao Spectre 2016 izay natolotr'i HP hanaloka ny MacBook an'i Apple. Roa andro lasa izay dia nilaza taminay izahay fa HP no nanambara izany Handeha hanolotra laptop vaovao aho Hanaloka ny MacBook an'ny Apple manokana izy io, ary ny iray amin'ireo zavatra nireharehany dia ny ho lasa manify kokoa noho ny tsara indrindra an'ny Apple. Eny, efa eo amintsika ny HP Specter 2016 ary ny marina dia toa napetrak'i HP amin'ny bateria ny bateria raha ny famolavolana sy ny fitaovana anatiny.
Na dia tsy nanolotra zava-baovao aza i Apple tamin'ity herinandro ity raha afaka nahafantatra ny fomba fampisehoana hatrany ny patanty izy ireo ary amin'ity tranga ity dia nifantoka tamin'ny famelana ny hevitra hahafahana mampiasa ny teknolojia Force Touch amin'ny fitaovana maro mifamatotra tsara izy ireo. Amin'ity tranga ity, ny patanty dia mifantoka amin'ny maodely vaovao an'ny Magic Mouse ary kitendry laptop.
Ary tonga teo am-pamaranana ity fitambarana niaraka tamin'ny Vaovao momba ny tsingerintaona faha-40 an'i Apple amin'ny lisitra Apple Music. 40 taona lasa izay no nanombohan'ny Apple ny dia nataony teo amin'ny tontolon'ny informatika momba ny mpanjifa. Manantena izahay fa afaka manohy toy izao izy ireo mandritra ny taona maro ho avy, satria araka ny filazan'ny maro, ny vokatra Apple dia efa filozofian'ny fiainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Toro lalana Apple ho an'ny mpivarotra, Patent Force Force, Apple's 40 taona amin'ny mozika, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Raha mpamorona rindrambaiko ho an'ny iOS sy OS X ianao dia mijanona tsy maintsy atao ao amin'ny kongresin'ny Applause
Ny lalao moto 5 tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad